Musharraxiinta is hubeynaya waxaan ula dagaallamaynaa sida al-Shabaab oo kale | Allbalcad Online
Home WARARKA Musharraxiinta is hubeynaya waxaan ula dagaallamaynaa sida al-Shabaab oo kale
Madaxweyne Laftagreen ayaa halkaas ka sheegay in siyaasiyiinta qaarood “ay is hubeynayaan si ay khalkhal u geliyaan amniga doorashada”. Ma u sheegin magacyada siyaasiintaasi iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan arrintaasi. Qofka marka uu xilka raadinayo miyir badan ma laha, wax walba ayaa ka suurtooba. Wax aanan kursiga ahayn uma jeedo.
Doorashada Aqalka Sare ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa la filayaa inay dhacdo dhawaan. 31-kii bishii July ayuu madaxweyne Laftagareen soo saaray liiska murashaxiinta u tartami doona kuraasta Aqalka sare ee maamulkaas. Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble wuxuu dhawaan soo magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka heer federaal xilli uu dalka ku jira diyaargarowga qabashada doorasho dadban.
Previous articleMadaxweyne Deni oo Daah-furay Madasha Bangiyada islaamiga ah ee Soomaaliya
Next articleDuqa Muqdisho oo xarigga ka jaray xarunta Hooyada iyo Dhalaanka Dharkenley